मोवाइलसमेत बाँड्ने तबरेज को हुन् ? | DNFMEDIA
काठमाडौं । पर्साको विरगञ्ज महानगरपालिका २२ का तवरेज आलम एक सामान्य मान्छे हुन् । युवा अवस्थादेखि नै समाजसेवामा लागौं भनेर दैनिकजसो सेवा गर्दै आएका उनी परिवारको इतिहासका आधारमा होइन आफूले गरेको कामका आधारमा समाजमा चिनिन चाहन्छन् ।
उनले गाउँमात्र होइन जिल्लाको लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । मातृभूमी अभियानका पर्सा अध्यक्षसमेत रहेका उनी निस्वार्थ रुपमा सेवा गरेको बताउँछन् । ‘अहिले केही सेवा गरेजस्तो गरे भोलि केही पाइएला भन्ने सोचेको छैन’ उनले भने ‘सेवा गर्ने हो अरु कुनै दायाँबायाँ कुरा छैन, मैले त यति गरें भने अरु पदमा भएकाले त धेरै कुरा गर्नुपर्ने हो ।’ उनले मठ मन्दिर र धार्मिक क्षेत्रमा खाद्यान्न र पाल बाँडेका छन् । कोरोना संक्रमणको समयमा उनले आफ्नै पहलमा १० हजार थान मास्क र ५० लिटर सेनिटाइजर वितरण गरेका थिए । उनले ती मास्क सशस्त्र र जनपथको प्रहरी कार्यालय, बृद्धाश्रममा, बालबालिकाका साथै पैदलयात्रीलाई बाँडेका थिए । उनलाई पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक डा. युवराज सुवेदीले ४ कार्टुन साबुन उपलब्ध गराएका थिए । महानगरपालिकाका मेयरले उपलब्ध गराएको ३ सय केजी दाल पनि उनले समाजमा लगेर वितरण गरिदिए । समाजसेवा गर्न पाउँदा खुशी भएका उनी समाजसेवालाई निरन्तरता दिने बताउँछन् ।
आलमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मुस्लिम महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष रेश्मा बानुले पनि ५ हजार थान मास्क दिएकी थिइन् । उनी अभियानका क्रममा सहयोग गर्नेहरुप्रति आभारी छन् । यतिमात्र होइन उनले वडासँग सहकार्य गरेर गाउँमा १० वटा कल पनि गाडिदिएका छन् । पानीको अभावमा रहेकालाई कल गाडिदिएपछि स्थानीय खुशी भएका छन् । केहीलाई रोजगारीमा समेत लगाइदिएका उनले जाडोको समयमा वडा नम्बर ३१ मा केही थान कम्वल पनि वितरण गरेका छन् । उनले केही दिनमा फेरि कम्वल वितरण गर्ने योजना बनाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि विशेष पहल गर्छु भन्दै आएका उनी मठमन्दिर संरक्षण अभियानमा पनि लागेका छन् । उनले मन्दिरका बाबालाई मोवाइल दिएका हुन् । ‘उहाँहरुसँग मोवाइल रहेनछ अनि मन पग्लियो र नयाँ मोवाइल किनिदिएँ’ उनले भने ‘ सानै छु म पनि तर काम सानोतिनो गरेजस्तो लाग्दैन ।’
उनी जेबी फाउण्डेसन पर्साका सभापति, जनता समाजवादी पार्टीका मुस्लिम संघका केन्द्रीय सदस्य उनी पशुपति अन्नपूर्ण आश्रम पर्साका सल्लाहकारसमेत हुन् । उनी समाजसेवाबाट नै आफूलाई सन्तुष्टि हुने हुँदा सधैं यो अभियानमा लागिरहेको बताउँछन् ।
Previous: एम्एस्सी गरेका मन्त्री यसरी भए कांग्रेस सह–महामन्त्री
Next: सिद्धपुरी अभियानमा किन गाइयो ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली’ ?